Andraikitra ara-tsosialy - Chengdu Hemeikaineng Medical Equipment Co., Ltd.
Andraikitra amin'ny fahasalaman'ny olombelona
Androany, ny "andraikitra ara-tsosialy ara-tsosialy" dia nanjary lohahevitra mafana indrindra manerantany. Hatramin'ny nananganana ny orinasa tamin'ny 2013, ny andraikitra amin'ny fahasalaman'ny olombelona dia nitana andraikitra lehibe indrindra ho an'ny HMKN, ary io no ahiahy lehibe indrindra natolotry ny mpanorina ny orinasa.
Ny andraikitray ho an'ny mpiasa
Hamarino ny asa / fianana mandritra ny androm-piainana / fianakaviana sy asa / fahasalamana mandra-pisotroan-dronono. Ao amin'ny HMKN, mandinika manokana ny olona izahay. Ny mpiasa dia manao anay ho orinasa matanjaka, mifanaja, mankasitraka ary mifandefitra isika. Io antony io ihany no ahafahantsika mahatratra ny fifantohan'ny mpanjifa tokana sy ny fitomboan'ny orinasa.
Fanomezana fanampiana amin'ny fisorohana ny valanaretina / asa fanampiana ny horohoron-tany / asa soa
Ny HMKN dia miantsoroka ny andraikitra iraisana amin'ny fiahian'ny fiarahamonina. Nanome fanampiana ara-pitsaboana 1 tapitrisa yuan nandritra ny Horohorontany Wenchuan tamin'ny 2008, ary fanomezana ara-pahasalamana 500000 yuan ho an'ny Horohoron-tany Lushan tamin'ny taona 2013. Noho ny COVID-19 dia nanome 500.000 yuan famatsiana fisorohana valan'aretina ho an'ireo andrim-pitsaboana tamin'ny taona 2020 Mandray anjara amin'ny fampihenana ny fiantraikan'ny valanaretina, loza ary aretina amin'ny fiarahamonina izahay. Ho fampandrosoana ny fiaraha-monina sy ny orinasanay dia tokony hitandrina bebe kokoa amin'ny fahasalaman'ny olombelona isika ary hitondra tsara kokoa izany andraikitra izany.